मागी मागी छोराऽऽऽ बे | Shresthakedar's Blog
साभार:- Mysansar, May 1st, 2012
शीर्षक पढेर तपाईले के अर्थ्याउनु भो कुन्नी मैले चैँ ‘नसक्नेले बेमतलबको स्वाँग रचेर ढ्वाँग फुक्नु हो’ भन्ने अर्थ्याएको छु। अर्थात हातमा पैसा न कौडी, बजारतिर दौडी। माथीको शिर्षकलेपनि त्यै भन्छ। मागी मागी छोरा बे किन गर्नुपर्यो होला कसैलाई ? बुआरी खुसुक्क भित्र्याए त भैगो नि। ढ्वाँग फुकेरै भित्र्याउनु पर्छ र ? त्यसकोलागी दाम दुमडी नचाहिने भे त हो त नि। दाम दुमडी नि चाहिने, अनि त्यो चैँ छैन तर रहर चैँ पुरा गर्नुपर्ने रे। अनि त्यो पनि मागी मागी। अनि फेरी त्योपनि आफ्नो बे हो र ? छोराको बे। यसैले मैले भनेको हुँ ‘स्वाँग रचेर ढ्वाँग फुक्नु।’
हुन त हामी नेपालीहरु छोराको बेकोलागीमात्र काँ स्वाँग पार्छौं र ? दिव्य दृष्टिले हेर्नुभयो भने उत्तर देखि दख्खिन, पूर्वदेखि पश्चिम नेपालका हामी मनुवाहरुलाई यस्तै यस्तै रहर लागेको हुन्छ। सरकारमा बस्ने हुन् कि सडकमा बस्ने हुन्, महलमा बस्ने हुन् कि सार्वजनिक हलमा बस्ने हुन् सबैले यस्तै काँचो रहर पालेका छन्।
नपत्याए अहिले ग्यासकै कुरा गरौँ। यो ग्यास भन्ने जिनिस न हामीकाँ बन्छ, न पाईन्छ। तर सोख गर्ने नामाँ हाम्ले ग्यास चुलो जहाजाँ हालेर विदेशबाट शान दे’र मगाउँछौँ, अनि ग्यास चैँ काधाँ बोकेर भित्र्याउँछौँ। यतिन्जेल त ठिकै छ रे लौ। तर जुन दिन ‘साहुकाँ ग्यास सिद्ध्यो’ भन्ने हल्ला चल्छ त्याँदेखि सबैको कन्त विजोग भा’को मैले देख्या छुँ। रित्तो ग्यासको सिलिण्डर बोकेर यो पसल, त्यो पसल गर्दा कम्ता गारो हुन्न। बल्ल बल्ल पाइहालेपनि राउ जस्तो साउले भन्या दराँ लिनुपर्ने हुन्छ। नलेर के गर्ने, भोकै बस्नु भे’न, तर खल्तीको क्यास चैँ महँगो ग्यासको नाममा झ्याम। अब, यै ग्यास हाम्रै नेपालाँ ठ्वास्स पाईदे’को भे’ कति सजिलो हुन्थ्यो। आफ्नो माल, आफ्नै चाल हुन्थ्यो। आफ्नै मादल, आफ्नै ताल हुन्थ्यो। अनि राष्ट्रको क्यास भनौँ तपाई हाम्रो क्यास अहिल्या̕ ठिटाहरु विदेशीएका झैँ विदेशीने त थिएन। याँ त मागी मागी छोरा बे। तर तपाई भन्नु होला नि ‘ति ठिटा त एकदिन फर्किहाल्छन् नि।’ तर म के भन्छु भने ‘तिनमा भ’को करेण्ट अ‍ैले देशमा चलाउन पा’ पो काम लाग्छ त। ति आउने बेलाँ चाउरेर आउँछन्। हात पाखुराका मासु झोल्लिइ सक्या हुन्छ। त्यतिखेर के काम। रिटायर्ड लाईफ पो विताउँछन् त।’ त्यसकारण तिनमा भ’को करेण्ट र ग्यासमा हालेको पैसा अहिले बाहिर गयो गयो, मरे नि फर्कन्न। अनि भेन मागी मागी छोरा बे ?
अर्को कुरा, मोटराँ हाल्नी प्याट्रोल नि त्यस्तै त हो। तर प्याट्रोल नि हामीकाँ बन्दैन। प्याट्रोल जस्तै पानी त छ नि। दिनरात त्यो प्याट्रोलरुपी पानी कुद्या कुदै छ। तर माल पा’र चाल पा’ पो हाम्रा नेताहरुले। लौ है, कुरा भाँडिन थाल्यो। सँविधान बनाउन भाँडिया जस्तो। जे होस् नेता देखि जनता सबैलाई करोडपर्ने मोटर नेपालको थोत्रो र आन्द्राजस्तो मसिनो रोडमा कुदाउनु पर्या छ। त्योपनि बेला बेलाँ प्याट्रोल नपाएर कन्त विजोग। त्यसो त करोड पर्नेमात्र किन हुन्थ्यो र, सलाईको बट्टा जस्तो दुईचार लाखाँ पाउने नि गाडी छन् केरे। जसले करोड बेहोर्न सक्दैनन् तिनले सलाई किन्छन्। तर तिनलाईपनि प्याट्रोल नभै हुन्न। सदा सर्वदा, बाह्रै महिना, बाह्रै काल गण्डकि कोशी बग्या झै प्याट्रोल नि सललल बगे पो सलाई चढे नि जिप चढे नि मज्जा आउँथ्यो। तर ह्याँ पनि मागी मागी छोरा बे। जुनदिन प्याट्रोल भन्ने अमृत सकेको खबर चल्छ, अनि ति प्याट्रोल वाहनलाई चढेर, घचेटेर, घिसारेर विरामीलाई वैद्य वाकाँ लग्या जस्तो अमृत ख्वाउन लैजानु पर्छ। अनि लामको लामो लर्को देखिन्छ। यसमा अर्को थरी पनि मिसिएको हुन्छ भटभटे। यो भट्भटे नभा त घरै छैन। जसरी अहिले नेपालाँ कुनै पनि परिवारमा विदेश नजाने घरै छैन त्यसै गरि धेरैले घराँ भटभटे पाल्या हुन्छन्। जे भे नि यि सब मोटरकार, भटभटेका रहर हुने हाम्लाई प्याट्रोलको चटारोले जतिसुकै पेलेपनि हाम्ले यो रहर छोडेका छैनौ। अनि भेन मागी मागी छोरा’ बे ? पितिक्क बिरालोको मूत झैँ अलिकति प्याट्रोल जर्किनमा हालेर घर आउँदा उसले नाक घिरौँला भन्दा नि ठुलो बनाएको हुन्छ मानौँ उ सँसारलाई पछारेर आ’को छ। एकछिन अघिसम्म लाईनमा कतिचोटि पछारियो त्यसको चैँ बाल मतलब छैन।
त्यसो त ग्यासकोमात्रै के कुरा गरम् र। अब हाम्रा बाउरामले गँडतन्त्र इस्मारक बनाउने रे किर्तिपुराँ। अनि त्यो बनाउन चैँ एक अरब एक्काईस करोड चाहिने रे। तर त्यो पैसा काँबाट आउँछ होला भन्ने हाम्लाई लाई राख्या छ। जे गर्न नि विदेशीको मुखाँ हेर्नुपर्ने हाम्ले यत्रो रकम यस्तो सुइरो झैँ खामो बनाउनलाई खर्च गर्ने रे। व्हाँ गाउँघराँ, पहाडाँ पुल नभेर तुर्लुँगमा तुर्लुँ….ग झुण्डेर मान्छेहरु आउजाउ गरिराख्या छन्। त्यै पैसाले त्याँ पुल बनाई दे कति जाति हुन्थ्यो। नभे, कति स्कूले बच्चाहरु नाममात्रको स्कूलाँ बाहिर चौराँ बसेर पढ्नु परिराख्या छ, तिनलाई त्यै चैने स्कूल बनाई दे’ हुन्थ्यो। तर मागी मागी छोरा बे गर्ने हाम्रो बानी भा’कोले त्यतातिर के बुद्धि जान्थ्यो र ? उसमाथी यै स्तम्भ रत्नपार्काँ राख्ने भनेर माकुनेले उद्घाटन गर्दा ‘पेरीसको आईफल टावर जस्तै बनाउ है’ भनेर आदेश दि बक्स‘थ्यो रे। म त्याँ भैद्या भे ‘ईस् खा.. पैसा नि पेरीसबाट आउँछ कि’ भनेर सोध्ने थेँ। फेरी घरमा खानलाई जाईफल छैन आईफलको नक्कल गर्नुपर्ने। अनि त भनेको नि मागी मागी छोरा बे।
यै बेलाँ मैले प्रपुले सगरमाथा चढ्ने भनेर हिन्या खबर पनि सुनेँ। बाउरामबाट दुई करोड फुत्काई सक्या ‘थ्यो। बाउरामलाई नि के ‘थ्यो र? आफ्नो जाने होइन। यामीको जाने होईन। दिएछन् ख्वात्तै ‘लाउ, बाउ लाउ’ भन्दै। नदिए बाउको बाउबाट खप्की सुन्नु पर्ने ‘थ्यो क्यारे। के गर्नु, तपाई हामीले कर बलले तिरेको करको पैसा उसले रहरै रहरमा झण्डै उडाई देको थियो। त्यो त धन्न नेपालीको एकले अर्काको खुट्टा तान्ने बानी भ’को भे’र सब चिच्याएर, कराएर पैसा फिर्ता दिनुपर्यो विचराले। सर्वहारा वर्गकोलागी जिउ ज्यान फालेर लागेका बाउको त्यस्तो छोराको चाला देखेर मन उदेकमात्र होईन झण्डै हुलुक्क नि भाथ्यो मेरो। सरकारसँग लेर, बरु उल्टो सरकारलाई राजस्व नै नतिरी सगरमाथा चढ्न हिँडेका प्रपुको पारापनि मागी मागी छोरा बे भन्या झैँ भाथ्यो। बरु त्यै पैसाले सर्वहारा वर्गलाई यसो बाँड्या भे कति आशिक लाग्ने थ्यो नाई। तर के गर्नु र, बुद्धिमा बिर्को लागेपछि मागी मागी भे नि सगरमाथा चढनै पर्ने। आखिराँ नाकाँ ठोसो बोकेर फर्केछन्। भको नाक नि सिद्ध्याएर। हुन त नाकै भन्न लायकको नाक त काँ थ्यो र ? हेर्दा फुलौरा टाँस्या जस्तो।
तपाईपनि मागी मागी छोरा बे कत्तिको गर्नुहुन्छ कोनी। गर्ने भे आफ्नो बे गर्नु मागी मागी, चाहिए म नि हाल्दिउँला यसो तपाईको ट्वाकाँ ट्याँगर्याँग एक दुई सिक्का खसालेर। तर मागी मागी छोरा बे चैँ कत्ति नगर्नुस है। सुहाउँदैन के, पटक्कै सुहाउँदैन।
« ‘ए, नारान्!’
अनलाइन लभ »